नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)मा नेपाल सुन्दरी :: a1nepal.com.np
– बच्चु विक
सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी अधिकांशको लक्ष्य हुन्छ, मोडलिङ र अभिनय गर्ने। तर, मिस नेपाल २०१६ की रनर अप तथा मिस नेपाल इन्टरनेशनल वर्षा लेखी भने यतिबेला नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) मा वातावरण विज्ञान पढिरहेकी भेटिन्छिन् ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा रुचि नै नभएको भए मिस नेपाल मा भाग लिनुको अर्थ के त ? पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट स्नातक गरेकी वर्षा यसमा जातीय थिचोमिचोले काम गरेको तर्क गर्छिन्। “थारु समुदायका युवतीलाई कमैया र कम्लरीका रुपमा मात्रै हेरिएको थियो”, उनी भन्छिन्, “हामी पनि कम छैनौं भनेर प्रमाणित गर्नुथियो।” कहिल्यै राम्ररी श्रृंगार नगर्ने आफूलाई इखले नै उपाधि जिताएको उनको दाबी छ । मिस नेपाल इन्टरनेशनल भएपछि मोडलिङ र चलचित्रका ‘अफर’ आए पनि वर्षा त्यतातिर लागिनन्। “अहिलेसम्म त्यतातिर रुचि छैन”, वर्षा भन्छिन्। मिस नेपाल इन्टरनेशनल को ताजले ‘क्लिन अप नेपाल–२०१६’ सद्भावनादूत बनेकी उनी यसबाट रुचिको विषय वातावरण विज्ञानबारे बुझ्न निकै सहयोग पुगेको बताउँछिन्। उसो भए वर्षा वातावरणविद् बन्न चाहन्छिन्? “होइन, वातावरणबारे जानेर म राजनीति गर्न चाहन्छु”, उनी भन्छिन्। शरीरको सौन्दर्य प्रतियोगिताकी सहभागी उनलाई अब बौद्धिक कर्म गर्न मन छ। “यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्दै नेता र पार्टीहरूलाई गाली गरेर मात्र केही हुन्न। आफैं काम गर्नुपर्छ”, उनको अठोट छ। उनको भनाइमा, सप्तरीको फत्तेपुरमा जन्मे–हुर्केकी उनले तराई–मधेशका पीडा महसूस गरेकी छिन्, हिमाल–पहाडका दुर्गम गाउँका समस्या देखेकी छिन्। “त्यसैले पनि मलाई राजनीतिप्रति चाख छ”, उनी भन्छिन्। राजनीतिमा वर्षाको चासो जगाउने अरु कोही नभई राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष राजकुमार लेखी हुन्। वर्षा उनकै छोरी हुन् ।
फिल्म साउथ एशिया २०१७ आगामी साता शुरू हुने १८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै निकिता चन्दक मिस नेपाल– २०१७ घोषित (भिडियो पनि) गीतकार नबराज खड्काको आवाजमा नयाँ राष्ट्रिय गीत ‘हिमालदेखि तराईसम्म.. ‘ सार्वजनिक सयौं नेपालीको पोर्चुगलमा हुने भो बिजोग, कता भाग्ने त्यहाँका नेपाली पोर्न फिल्ममा फर्कन चाहदिनन् बलिउड अभिनेतृ सन्नी लियोन यी हुन् बीबीसीको १०० सूचीमा पर्न सफल भाग्यमानी दुई नेपाली महिला इजरायलवासी पोखरेली गीतकार कुमार पौडेलको ‘मायाको फूल’ सार्वजनिक हुदै सार्वजनिक भयो विन्ध्यवासिनी अवार्डको मनोनयन अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रम्प एनआरएनए इजरायलद्वारा चर्चित कलालारहरुको उपस्थितीमा “हरितालिका तीज सांगितिक उत्सव २०७३” को आयोजना
← अखिल क्रान्तिकारी १२ ओटा क्याम्पसमा विजयी	मातृभुमीको लागि पर्वत सेवा समाजको भारतमा पनि शाखा बिस्तार →